Ny fototra aloha… | NewsMada
Ny fototra aloha…
Hotohizana ny fanarenana ny rovan’Antananarivo. Maro ireo efa tsy manam-pinoana ny amin’ny fahavitan’izany intsony. Misy mihitsy aza ny naneho hevitra ny amin’ny tsy tokony handaniana vola amin’ny fanarenana ity vakoka ity fa avela fotsiny eo izy sy ny tantarany, toy ireo vakoka rava sy simba any ivelany.
Misoratra tsara ao anatin’ny politika ankapoben’ny fanjakana kosa anefa ny fanarenana ny lapan’i Manjakamiadana, sy ireo miaraka aminy mandrafitra ny rovan’Antananarivo. Efa nomahafisin’ny filoham-pirenena rahateo fa ho vita alohan’ny 26 jona 2020 izany. Velom-panantenana indray ireo naniry ny mbola hijoroan’ny Rova, indray andro any…
Fototra. Eny, vavolombelon’ny tantara teto Imerina sy manerana an’i Madagasikara mihitsy ny Rova. Talohan’ny nahamay azy, tranom-bakoka azon’ny rehetra notsidihina, nahafantarana tantara nisy na mety ho nisy, ary nahavaly fanontaniana maro nanitikitika ny tsirairay izany. Na ho izay fotsiny ihany aza, aleo harenina ny Rova…
Tetikasa goavana faharoa eo amin’ny lafiny kolontsaina ny fananganana ilay akademian’ny zavakanto sy ny kolontsaina. Izay tena anarany rehefa vita, ho hita eo ihany. Mahavelombolo kosa izany hoe hanana toerana handrantoana fahalalana hanampy ny talenta izany. Miainga any amin’ny fototra mihitsy mba hisongadina aoriana. Tetikasa lavitra ezaka!
Miresaka fototra ihany, mbola tsy kivy fa mampiantso indray izay rehetra voakasika amin’ny hankalazana ny fiandohan’ny taona vaovao iombonana ny minisiteran’ny Kolontsaina. Fankalazana iombonan’ny Malagasy, ho andro tsy fiasana fa fandraisana karama, ary ho andro firavoravoana mbola malaza no ho ny 1 janoary no tanjona. Mbola lavitra ezaka ihany koa kanefa dia tsy ahita marimaritra iraisana mihitsy ve?
Ny fototra aloha satria rehefa izany no mafy orina, mahazaka izay mavesatra, tsy voahozongozona, tsy matahotra rivodoza sy ora-mikija ary afaka mirehareha izay mijoro eo. Aoka tsy ho voasakan’ny firehan-kevitra tsy mitovy, ny finoana samihafa, ny fiaviana samy manana, sns, fa mba hatambatr’ilay kolontsaina malagasy kosa.